Coin Master: fumana ii-spins zasimahla ngala maqhinga | Iindaba zeGajethi
Coin Master: fumana ii-spins zasimahla ngala maqhinga
Ingqekembe yeyona nto ifanelekileyo esinokuyifumana kwii-smartphones ngoku. Inesigidi sabadlali ababambeke kwihlabathi liphela, bangena kwiinjongo zabo bekhangela iimali zemali zasimahla kunye nokujikeleza ukuqhubela phambili kuzo. Injongo yalo mdlalo kukusisiseko sokuba ngoosozigidi kwaye kancinci kancinci ukwakha eyona lali ilungileyo. Ubucukubhede balo mdlalo bulula ngokwenyani, ngokusekwe kwimidlalo ye-mini-ye-slots kunye namadabi.
Kodwa ayiyompumelelo eyintsalela ukuba lo mdlalo uphumelele, kuba kutsha nje sifunde ukuba igqithile kwi-Saga yeCandy Crush enamandla onke. Ukungaqiniseki okukhulu kwabadlali bayo kukungazi ukuba ugcina njani ujikeleza ngakumbi kunye neengqekembe zemali zasimahla. Oko kubizwa ngokuba "ziiNgqekembe" okanye "iiNkozo zasimahla" kubaluleke kakhulu ukuqhubela phambili. Kuyenzeka ukuba ezi spins zasimahla ngamaqhinga athile esiya kuwatyhila kweli nqaku.
1 Yintoni Coin Master malunga?
1.1 Impumelelo yeCoin Master
1.2 Idlalwa njani
2 Fumana free spin kwi Coin Master
2.1 Ezinye iindlela zokufumana iingqekembe zemali zasimahla nameva
3 Gwema iiwebhusayithi ezingummangaliso okanye ii-hacks
4 Izicelo zokufumana izibonelelo zasimahla
4.1 Imivuzo ye-CM
4.2 Ihagu Master
4.3 Jikelezisa Master
4.4 Qhagamshela Master
Yintoni Coin Master malunga?
Ngumdlalo onokukhutshelwa kwivenkile ye-iOS okanye ye-Android, eneempawu ezikhethekileyo kwaye oko kukuthi Kuya kufuneka siyidibanise neakhawunti yethu kaFacebook. Abaphuhlisi bakubandakanyile oku ngoba umbono ophambili kukuba ukuba asifuni kuhlala silindele ukuba ikhawuntari yethu igcwalise, Sinokusebenzisa abafowunelwa bethu kuFacebook ukubhalisela umdlalo, ngaloo ndlela sifumana ii-25 zokujikeleza ezongezelelweyo. Nangona njengesiqhelo kolu hlobo lwemidlalo yasimahla, sinokuzithenga ngqo ngemali yokwenyani.
Umatshini womatshini ulula kakhulu, ke iimfazwe azicacanga kakhulu. Siqala ngothotho lwee-spins koomatshini ekufakwa, oko kuya kukhokelela ekuphumeleleni imali engaphezulu okanye encinci ngamabhaso abo. Njengokuba Singafumana amakhaka ukuze sizikhusele okanye silwe neziando eziza kukuvumela ukuba uqalise ukuhlasela kwilali yabanye abadlali. Abasebenzisi abazamile bayakuqinisekisa ukuba bayazitshixela ukusuka kumzuzu wokuqala, kodwa isengumdlalo wamathuba ngezinto ezincinci ze RPG.
Impumelelo yeCoin Master
Akululanga ukubetha i-colossi enjengeCandy Crush, ngaphandle kokuba ngumdlalo onazo zonke izithako eziyimfuneko, nawo kukho ngasemva ukunyuswa okukhohlakeleyo kakhulu ngabasasazi bayo. Iintengiso zabo zikho kuyo yonke indawo kwaye badlala abantu abadumileyo, ukusuka kuJennifer Lopez, uEmily Ratajkowski ukuya kuTerry Crews.
Umdlalo uqala nge umatshini wokufaka kunye nezinye iikhredithi ekufuneka sizisebenzisile ukuphumelela imali kunye nokuqala umdlalo, kuba ngaphandle kwemali akukho kuphuma. Lo matshini uya kuba ngumthombo wengeniso yokuphuhlisa umdlalo. Siyabulela kule mali sinokuthenga izinto kunye nezinto: kwezi zando zikhankanywe ngentla apha, amakhaka ukuya ezifubeni apho siza kufumana into engahleliwe.
Kwi-spins sinethuba elincinci lokuba iihagu ezintathu ezincinci ziphume, ezi hagu zintathu zisinika ithuba lokuya kulwa ne-«Coin Master». Kule mpi sinethuba lokuphumelela imali eninzi ukugcwalisa ibhokisi yethu ukuba siphumelele. Ukutyhala okuza kusinceda kakhulu ukuqhubela phambili kumdlalo.
Sinee-spins ezikhethekileyo, enye yazo yimibhobho emithathu yolwelo oluhlaza okwesibhakabhaka esebenza ukuze singene kwimishini apho sinokufumana khona ijikelezisa ngakumbi kumatshini wokufaka.
Ekugqibeleni umbono womdlalo usisiseko, sibe namandla ngakumbi nangakumbi okwenza ukuba ilali yethu ikhule kwaye ngenxa yoko kuya kuba kubalulekile ukujongana nabanye abadlali ukuze siboyise kwaye baphange bonke ubuncwane babo. Icala elisezantsi koku kukuba ukuba umdlali omnye usebenzisa imali yokwenyani kwaye omnye akenzi njalo, baya kuba nethuba elibonakalayo ngaphezulu komdlali osebenzisa umxholo wasimahla. Ngesi sizathu siza kuchaza indlela yokufumana ii-spins zasimahla, ukuzama ukunciphisa isidingo sokuchitha imali yokwenyani.
Umthuthukisi: Ukusebenza kweNyanga
Fumana free spin kwi Coin Master
Eyona ndlela ithe ngqo kunye neyona iphambili yokufumana isixa esihle sokujikeleza simahla kwi-Coin Master kukudluliselwa. Cela nje abahlobo bethu ukuba bamkele isimemo sethu ngeFacebook, nje ukuba babhalise siya kufumana ibhonasi ye-25 spins yasimahla okanye ijikeleze. Kodwa kuyakubakho ukukhushulwa okufumanekayo apho isixa sinokunyuswa ukuya kuthi ga kwi-40 spin. Sinokukhetha ukuthumela amakhadi egolide kwi-Coin Master ngaphakathi kweqela elisemthethweni lomdlalo weFacebook.
Enye indlela yokufumana ijikelezisa kukuzikhusela ngokwabo. Ngenxa yoku kufuneka singene rhoqo kumdlalo kwaye sikhusele ilali yethu ekuhlaselweni ziimbangi ngokusebenzisa inkcitho yethu. Ukuba siqokelela i-4 baya kusivuza nge-spin yasimahla. Sinokufumana ijikelezisa simahla ngeephilisi zamandlaNgokufumana indibaniselwano yamandla amathathu e-capsule singaphumelela i-3 yokujikeleza simahla. Ezi ndlela zimbini sinokuzuza ngokudlala, ke kuya konwaba ngakumbi ukufumana ezi spins.
Ezinye iindlela zokufumana iingqekembe zemali zasimahla nameva
Eyona ndlela isebenzayo kwaye imnandi yokufumana iingqekembe kwi-Coin Master kukujongana nabanye abasebenzisi edabini, ukuba siyoyisa siya kufumana umvuzo olungileyo. Ngaxeshanye njengokonwaba, le ndlela inobungozi ngandlel 'ithile ukuba siyaphulukana nayo, iya kohlwaya thina, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo yeyona ndlela iluncedo eya kuthi isinike isixa esikhulu semithombo yokuqhubela phambili.
Elinye iqhinga kwaye ndicinga ukuba enye yezona zicetyiswayo kukuhlasela izindlu ezonakalisiweyo okanye ezonakalisiweyo ezilalini. Abasebenzisi bahlala bedlula beshiya iindawo ezininzi ezichithwe sisiqingatha, esinokuzisebenzisa kuba ezinye zezo zindlu zineemali ezininzi ngakumbi kunokuba zijikeleza.
Phakathi kwazo zonke izinto esinokuzenza ekukhangekeni kwemali kukusebenzisa ukumbiwa kwezinto, kangangoko kunokwenzeka xa sisenza ukumbiwa, kukuba sifumana ubuncwane ngohlobo lweengqekembe, ingcebiso kukuba ubambe kwimingxunya emi-2 ehambelanisiweyo indlela yemizuzwana embalwa, ukuba kukho iingqekembe eziza kumbiwa kwaye uya kuthatha isixa esikhulu semali. Kungafuneka ukuba sidlale ngokukhawuleza, oku kuthetha ukuba kufuneka sikulungele ukukwenza ngokukhawuleza okukhulu, kuba kukho ithuba lokusilela kwaye singafezekisi nto.
Gwema iiwebhusayithi ezingummangaliso okanye ii-hacks
Ukuba senza uphando olukhawulezileyo kwi-intanethi yeengqekembe okanye ii-Coin Master simahla, sifumana inani elikhulu leevidiyo kwiYouTube enamakhonkco asikhokelela kumaphepha ewebhu angaphambili. Phantse bonke ingcaciso icacile, Bathembisa ukuba ukuba ubhalisa kwaye unxulumana ne-imeyile yakho uya kufumana isixa esikhulu semali kunye nezixhobo zasimahla. Ungakholelwa nantoni na oyifundayo Zonke ezi zizikrelemnqa ezizama ukusebenzisa idatha yakho okanye i-imeyile yakho ukumilisela i-imeyile yenkohliso.
Olu hlobo lwephepha lewebhu lingumthombo wazo zonke ii-imeyile esizifumanayo kuogaxekile okanye kwifolda ye-junk. Banokusebenzisa iTrojans ukuba bebe ulwazi kwikhompyuter yakho okanye kwifowuni ukuba ufaka uhlobo oluthile lwenkqubo. Siza kulawula ngokupheleleyo nayiphi na indlela enjalo.
Izicelo zokufumana izibonelelo zasimahla
Kukho ezinye izicelo ezisemthethweni ezikunceda ukuba ufikelele kwizibonelelo okanye ukunyuselwa kwespin simahla kunye neengqekembe. Siza kunika iinkcukacha ezinye zazo.
Ngaphandle kwamathandabuzo eyona ikhuthazwayo, sisicelo eso khangela izibonelelo zasimahla kunye nezixhobo kumajelo asekuhlaleni, ezikhutshelwa ukugcina abasebenzisi bekhuthele kwaye bencamathele kumdlalo. Ndiyabulela kule sicelo awudingi ukukhangela okanye uqaphele zonke ezi zinto. Ngokujonga nje kwisicelo esiya kuba nayo yonke into esesandleni.
Ukongeza, esi sicelo sikuvumela ukuba wandise ukubheja kwakho x5. Ke xa kufikwa ekufumaneni imivuzo yakho, ziya kuphindaphindwa ngo-5. Ke ngoko unokufumana izigidi zeengqekembe ngokuphosa nje enye okanye iinyundo ezi-5 zokuhlasela iintshaba zakho kwaye ebe iingqekembe zazo. Eyona nto imbi malunga nesi sicelo kukuba intengiso equlethwe kuyo inomdla kakhulu, iyacaphukisa xa siyisebenzisa.
Umthuthukisi: Imivuzo yeCMR
Olunye usetyenziso oludumileyo kweli candelo, lunokukhutshelwa okungaphezulu kwe-100.000 kwivenkile yesicelo. Ngayo sinokufumana umndilili wama-30 wokujikeleza simahla ngosuku. Oko kuya kuba luncedo kakhulu kuthi xa siqhubela phambili kumdlalo. Ujongano luyinto enqabileyo kodwa inomdla kakhulu kwaye ayizukubiza mali kuthi ukuba siqhelane nalo.
Ihagu Master: Free osebenzisa kunye neengcebiso Coins
Uhlelo lokusebenza olufana kakhulu nolwangaphambili olunonxibelelwano olulinganayo. Ngaye sinokufumana okuninzi zemali simahla njengoko ijikelezisa. Ngenisa nje icandelo ngalinye ukuze ufumane eyona nto sinomdla kuyo. Ezi ngqekembe ziya kubaluleka ekuthengeni izixhobo, amakhaka okanye ukutya kwesilwanyana sethu. Zonke ezi zixhobo ziya kubaluleka ukuqhubela phambili kumdlalo ngaphandle kokulinda ukuba ii-spins zethu ziphinde zilayishe.
I-Spin Master-Iingcebiso zamahhala kunye neengcebiso zeengqekembe
Umthuthukisi: I-Prayosha Plaza
Ngokungafaniyo nezo zangaphambili, sifumana ujongano oluhle kakhulu ukujonga. Inomdla kwaye iyasivumela ukuba sibhalise. Kuya kufuneka sazi ukuba ezi spins uza kuzifumana zichithwe kwaye sinokufumana kuphela i-30 spin ngosuku, okanye ukusilela oko, isigidi semali ngosuku. Nangona kunokubonakala kukuncinci, kungangcono kunokulinda ukuba siphinde silayishe kwakhona.
Ndiyathemba ukuba zonke ezi ngcebiso namacebo kukunceda kwaye Siya kuba nombulelo ukuba uthatha isigqibo sokuthatha inxaxheba, ukufaka isandla ngakumbi kwicandelo lamagqabaza. Naluphi na uncedo luyamkeleka xa kufikwa ekufezekiseni injongo yokuba sisityebi kwi-Coin Master.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » Coin Master: fumana ii-spins zasimahla ngala maqhinga
Iwele lamawele, ii-headphones ze-TWS ezivela kwiFresh´n Rebel
Sihlalutya entsha kwi-UGREEN yokutshaja ibhetri